Apple ရဲ့ WWDC 19 မှာ ဘာတွေ မျှော်လင့်နိုင်လဲ။ - Myanmar End User
Apple ရဲ့ WWDC 19 မှာ ဘာတွေ မျှော်လင့်နိုင်လဲ။
By Win Thet Oo May 29, 2019 432 views
Apple က တစ်နှစ်တစ်ခါ WWDC (World wide developer conference) လုပ်ပါတယ်။ အခြား နည်းပညာ company တွေလည်း WWDC ပွဲတွေကို လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Apple ရဲ့ WWDC မှာတော့ ဘာတွေအသစ်မိတ်ဆက်ပြီး ဘာတွေပြမလဲဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ Steve Jobs လက်ထက်ထဲက လုပ်လာတဲ့ Apple ရဲ့ WWDC ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူသန်းပေါင်းများစွာ ကြည့်ရှုကြတာ ဒီနှစ်ထိပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းကလို အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် အသစ်အဆန်းတွေက မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သတင်းတွေက ပေါက်ကြားပြီး မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ဘာလာမယ်ဆိုတာ သိသွားကြလို့ပါပဲ။
အခုလည်း iPad apps တွေက Mac တွေမှာ သုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက ထွက်နေပါတယ်။ တစ်ကယ်တမ်းသုံးလို့ ရမလား၊ မရဘူးလားဆိုတာ ဥပမာတွေနဲ့ သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးက ဘာကွာလဲဆိုလဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာက အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်လို့ရပြီး ဖုန်းက ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ window မှာ android app ကို သုံးလို့ရပေမယ့် android မှာ window သုံးဖို့က မလွယ်ကူပါဘူး။ အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံက ဖုန်းတစ်လုံး လုပ်ဆောင်ပုံထက် ပိုသာလွန်ပြီး လုပ်ဆောင်ပုံချင်းလည်း တူတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် လုံး၀ကွာခြားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က WWDC မှာတော့ apple က iPad apps တွေဖြစ်တဲ့ news, weather တွေကို ကွန်ပျူတာမှာလည်း သုံးလို့ရအောင် Mac OS update Mojave မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Photoshop app ကိုလည်း iPad မှာ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Adobe Company က တာဝန်ရှိသူတွေကို ဖိတ်ကြားပြီး စင်ပေါ်မှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် adobe ရဲ့ Photoshop app က iPad အတွက်သာထုတ်ထားပြီး ကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ app နဲ့ ကွာပါတယ်။
အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် iPad app တွေအားလုံး Mac မှာ သုံးလို့ရတော့မလားဆိုတော့ မရပါဘူး။ ဒီလိုသုံးလို့ရအောင် လုပ်ပေးမှာက app developers တွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးမယ့် app ကို Marzipan လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ Marzipan app ကိုတော့ Developer တွေအသုံးပြုလို့ရပြီး iPad app အတွက် စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်လို့ရအောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ အခု june လ သုံးရက်နေ့မှာတော့ Marzipan ရဲ့အဖြေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ App Developer တွေအတွက်တော့ ရင်ခုန်စောင့်ကြည့်ရမယ့် ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Win Thet Oo
Think Different! Do what you love! Love what you do!
လူတွေနဲ့ A.I တွေအတွက် Algorithm လုပ်ဆောင်ပုံက ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။
Facebook ရဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေ နဲ့ Zuckerberg ရဲ့ ပါဝါ။
Instagram မှာ အနိုင်ကျင့်ရေးသားတဲ့ post တွေကို တားဆီးပေးမယ့်​ Instagram Tool အသစ်
By Win Thet Oo July 18, 2019 0
Apple ရဲ့ Mimoji အတိုင်း တစ်ထေရာတည်း ထွက်လာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mimoji အသစ်။
By Win Thet Oo July 3, 2019 0
အခုချိိန် အသက်နှစ်ဆယ်လောက်သာဖြစ်ရင် A.I Company ကို စတည်ထောင်ချင်တဲ့ Bill Gates
Facebook ရဲ့ cryptocurrency ဖြစ်တဲ့ “Libra”
By Win Thet Oo June 28, 2019 0
Apple ရဲ့ Chief Design Officer ဖြစ်တဲ့ Jony Ive ရဲ့ ဖန်တီးမှုများ။
Samsaung က smart home accessories တွေ မိတ်ဆက်။
iPad သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ စျေးအသက်သာဆုံးနဲ့ ရနိုင်မယ့် iPad Pro နဲ့ အခြား gadgets များ
By Win Thet Oo June 24, 2019 0
Tablets တွေ ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်နားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google
Apple ရဲ့ 2015 Macbook pro 15″ မှာ Battery ပြဿနာရှိနိုင်။
By Win Thet Oo June 20, 2019 0
October 11, 2017 149540 views
October 12, 2017 112263 views
February 24, 2017 63056 views
November 16, 2016 42311 views